Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Fraport na TAV meriri obi ụtọ maka nnabata ọdụ ụgbọ elu Antalya ọhụrụ
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News
Iwu Fraport-TAV dị ka concessionnaire ga-agụnye ọrụ nke ọdụ ụgbọ njem na akụrụngwa "ala dị n'akụkụ" ndị ọzọ, dị ka ebe a na-ere ahịa, ebe a na-adọba ụgbọala, na nyocha ndị njem.
Na-etinye ọnụ ahịa kacha elu nke ijeri euro 7.25, Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Fraport AG na onye ya na ya na-arụkọ ọrụ TAV Airports Holding meriri ọrịre ahịa taa maka nkwenye ọhụrụ iji rụọ ọrụ Ọdụ ụgbọ elu Antalya (AYT), ọnụ ụzọ ámá nke Turkish Riviera. A ga-akwụ pasentị 25% nke ọnụ ahịa ahịa n'ihu n'ihu n'ime ụbọchị 90 ka emechichara nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ. Nkwenye dị maka ọdụ ụgbọ elu Antalya - nke Fraport na TAV nkwonkwo na-achịkwa - agwụ na njedebe nke 2026.
A na-atụ anya ka a bịanye aka na nkwekọrịta maka nkwekọrịta ọhụrụ ahụ n'ime nkeji mbụ nke 2022, na-echere nkwado nke asọmpi Turkey na ndị isi ọdụ ụgbọ elu. FraportIwu TAV dị ka onye nkwekọrịta ga-agụnye ọrụ nke ọdụ ụgbọ njem na akụrụngwa "ala dị n'akụkụ" ndị ọzọ, dị ka ebe a na-ere ahịa, ebe a na-adọba ụgbọala, na nyocha ndị njem. Oge arụ ọrụ maka nkwekọrịta afọ 25 ọhụrụ ga-amalite na mbido 2027 (mgbe ngafe nke nkwekọrịta dị adị).
N'okpuru nkwekọrịta ahụ, a ga-arụcha ọrụ akụrụngwa tupu oge ọrụ nke nkwekọrịta ọhụrụ amalite. Ọrụ ndị a gụnyere mgbasawanye nke Terminal 2 na ọnụ ụlọ, yana ịmepụta ụlọ ọhụrụ maka ndị njem VIP/CIP.
Na-ekwu maka ntinye aka nke ọma maka nke ọhụrụ ỌB. nkwenye, Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Fraport AGOnye isi oche Dr. Stefan Schulte kwuru, sị: “Anyị weputara nkwenye doro anya nke ọtụtụ afọ anyị ji arụ ọrụ na mmepe nke ọma. Ọdụ ụgbọ elu Antalya dị ka otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị n'ụwa. Tinyere onye otu TAV anyị, anyị na-atụ anya ịga n'ihu nraranye a maka ọrụ ndị ahịa, ihe ọhụrụ na ịrụ ọrụ kacha mma n'ime iri afọ ndị na-abịa. "
Fraport AG anọwo na-arụ ọrụ na Antalya ihe karịrị afọ iri abụọ. Kemgbe 1999, Fraport enwetala ọkwa Antalya nke ọma dị ka otu n'ime ụzọ ndị njem nlegharị anya na mpaghara Mediterranean maka ndị ọbịa si n'ofe Europe na gburugburu ụwa. N'ọtụtụ ụgbọ elu yana nnukwu netwọkụ ụzọ, AYT abụrụla ọdụ ụgbọ elu nke abụọ kacha na-ekwo ekwo na Turkey na mpụga Istanbul.
Na 2019, ọdụ ụgbọ elu Antalya ruru ihe ndekọ oge niile nke ndị njem karịrị nde 35. N'ihi ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, okporo ụzọ gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 73 kwa afọ na 2020 ruo ihe dị ka nde ndị njem 9.7. Agbanyeghị, okporo ụzọ malitere ịmalitegharị na 2021 - ọkachasị kemgbe oge ọkọchị - ihe dị ka nde ndị njem nde 20 maka oge Jenụwarị ruo Ọktọba.